ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် | MoeMaKa Burmese News & Media
ဒီနေ့ Mar 9, 2011 မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြ၊ အတည်ပြုချက်မှာ မြန်မာ့ အနာဂါတ်စစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးအတွက် မျိုးဆက်သစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို အဆုံးသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အနိုင်ရရှိသူမှာ မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်သည်။ သတင်းစာတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ် ပထမဆုံး ဖေါ်ပြခံရသည်။ ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ ၄၈ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ကျောက်မြက်ရတနာပြပွဲကို စစ်ဆေးစဉ် အတူလိုက်ပါလာသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟု ဖေါ်ပြထားသော သတင်းဖြစ်သည်။ ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးမှ တဆင့်တက်သွားလေပြီ။
အသက် ၅၄နှစ် အရွယ်သည် လက်ရှိမြန်မာ့စစ်တပ်တွင် ငယ်ရွယ်လွန်းသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အလယ်ဗဟိုတွင် သူ့လှုပ်ရှားမှုများစွာ တွေ့ရတော့မည်ဟု ကျွန်ုပ် တွေးဆမိသည်။ သူ့ငယ်စဉ်က လသာ အ.ထ.က(၁) အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် အတူကျောင်းတက်ရင်း သိခဲ့ရသည်။ သူ့တွင် လှပသော ညီမတစ်ဦးရှိကြောင်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
သူသည် သပ်ရပ်စွာနေထိုင်သော ခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်ရှိသည့် အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းအားကောင်းသူဖြစ်ပြီး၊ ဆင်းရဲမွဲတေလှသော မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် သူ ကံကောင်းပါစေ ဟု ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်းကို ဖေါ်ပြလိုပါ၏။
မင်းအောင်လှိုင်သည် ရန်ကုန်မြို့လည်တွင် ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်သည်။ သူ၏ ဖခင် ဦးခင်လှိုင်သည် ကျွန်ုပ်ဖခင်နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရဆောက်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း တွင် အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူတို့မိသားစုသည် ရန်ကုန်မြို့လယ် ဆူးလေဘုရားလမ်းမှ ဗဟိုမီးသတ်ဌာန မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ ကျယ်ဝန်းသော တိုက်ခန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ယောင်္ကျားလေးကျောင်းမှ ၁၀တန်းအောင်သည် မတ်လ ၁၉၇၂တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် RASU (Rangoon Aarts and Science University) တွင် ဥပဒေ ပထမနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ တတိယနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတပ် UTC (University Training Corps) တွင် ကျောင်းသားတပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန် ၁၉၇၄ခု ဇန္နဝါရီလတွင် မေမြို့စစ်တက္ကသိုလ် DSA ဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်းပြီး ၁၉၇၇ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒုဗိုလ်အဖြစ် မြန်မာတပ်မတော်တွင် တာဝန်စတင် ထမ်းဆောင်သည်။
ဂျူနီယာစစ်ဗိုလ်လေးအဖြစ် တပ်မ(၈၈) ၏ ခြေလျှင်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ တပ်မမှုးမှာ ဗိုလ်မှုးကြီးသန်း ရွှေဖြစ်သည်။ တပ်မမှုးသည် နောင်တချိန် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေဖြစ်လာပြီး နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ (န.အ.ဖ ဥက္ကဌ) ဖြစ်လာသူ လက်အောက်တွင် စတင်အမှုထမ်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူငယ်ချင်း မင်းအောင်လှိုင်သည် ရဲရင့်သော တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားဖြစ်၊ စကားကြီးကျယ် လုံးဝမပြောသူဖြစ်သည်။ စစ်သားကောင်းတယောက် ဖြစ်ပြီး၊ စာပေထူးချွန်သူ၊ လူကြီးလူကောင်း ဆန်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
တပ်မ၄၄ ၏ တပ်မှုး၊ ဗိုလ်မှုးချုပ်ဖြစ်လာပြီးနောက် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုတွင် စခန်းချခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ သြဂုတ်လတွင် စစ်တက္ကသိုလ် DSA သို့ ၁၉ဦးမြောက် ကျောင်းအုပ်ရာထူးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခံရသည်။ အနောက်ပိုင်း န.ပ.ခ တိုင်းမှုးအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးသို့ မြှင့်တင် ခန့်အပ်ခံရသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်စပ်အရေးခင်းများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့ရသည်။
၂၀၀၈ တွင် နာမည်ကျော် ရွှေတြိဂံဒေသ တိုင်းမှုးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပြီး မကြာမှီ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူး သို့ တိုးမြှင့်ခံရသည်။ အမှတ်(၂) အထူးစစ်ဆင်ရေးဒေသ (BSO-2) တွင်လည်း ဦးစီးမှုးအဖြစ် တာဝန်ပေးခံရသည်
၂၀၀၉ သြဂုတ်လတွင် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား National democratic Alliance Army (NDAA) ကိုးကန့်ဒေသ၊ ရှမ်းပြည်နယ် စစ်ဆင်ရေးများကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ဇွန်လတွင် တွဲဖက် စစ်ဦးချုပ် (ရေ၊ လေ) အဖြစ် တာဝန်တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံရသည်။ ထို့နောက် စစ်ဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဖြစ်လာသည်။
အောက်ပါ ဆောင်းပါးမှာ DSA စစ်တက္ကသိုလ် ၂၀၀၄ သြဂုတ်လ ရွှေရတုမဂ္ဂဇင်းတွင် သူကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့ခြင်းကို ကျွန်ုပ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ (မြန်မာပြန်မှတ်ချက်။ တပ်မတော် မျိုးဆက်သစ် စစ်တက္ကသိုလ်သို့ မမျှော်လင့်ပဲ တာဝန်ချထားခံရခြင်းကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ကြောင်း၊ ထိုအချိန်မှစပြီး စစ်တပ်မျိုးဆက်သစ်ကို တက္ကသိုလ်ကြီး သူတို့ခေတ်နှင့်မတူတော့ပဲ ပြောင်းလဲနေပြီဟုသော ဆောင်းပါးတိုလေးဖြစ်သည်)။
၂၇ မတ် ၂၀၁၂ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင် (ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်) ၏ တပ်မတော်နေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ပြီး၊ စစ်ချီတက်ခြင်း၊ စစ်လက်နက်၊ပစ္စည်းများ၊ ဂျတ်တိုက်လေယဉ်များကို ခေတ်မှီတပ်မတော်ကို ပြည်သူသို့ ပြသခဲ့သည်။
၃ ဧပြီ ၂၀၁၂ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် မင်းအောင်လှိုင်ကို ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟု ပထမဆုံး ရေးသားပါသည်။ ယခင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟု ရေးသားရာမှ ရာထူးတိုးသွားပုံရ၏။ ရာထူးတိုးသော်လည်း ‘ဒု’ အသုံးအနှုံးကြောင့် ပထမ မည်သူလဲဟု ဒွိလော ဖြစ်ရပါသည်။ ယခင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ မဖြစ်ပါစေနှင့်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ မျှော်လင့်ချက်ပြည့်ပါ၏။ ၂၀၁၃တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ချစ်သူငယ်ချင်း မင်းအောင်လှိုင်၊ ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပါသည်။
ယခု သင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်နေပြီး စစ်တပ်နှင့်တိုင်းပြည်အတွက် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂတိပြုခဲ့သည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင် တော့ မည်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်တွင်းစစ်များမှငြိမ်းချမ်းရေး၊ ခေတ်မှီ သာယာဝပြောသော တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးအတွက် အသစ်သော မြန်မာပြည် စစ်တပ်နှင့်အစိုးရ တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတဖြစ်နိုင်ချေရှိသူဟု သတင်းထွက်နေသော တပ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဓါတ်ပုံကို သူ၏ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်တွေ့ရသောအခါ တခေတ်ဆန်း လေပြီဖြစ်သော မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကို အံ့သြမိပါသည်။ ဝန်ကြီးများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘုတ်များရှိနေကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံရေး ခေတ် သစ်လား၊ တရားဝင်ဖေ့စ်ဘုတ်လားတော့ မသိရပါ။ စည်းရုံးရေးလုပ်ဆောင်နေသည်မှာ သေချာပေသည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံဓါတ်ပုံကို ဒီဇင်ဘာ၁၃၊ ၂၀၁၃တွင် တင်လိုက်သောအခါ Like 3244 ကြိမ်ရရှိသွားသည်။ ပြစ်မှုကင်းရှင်းစွာဖြင့် အသံလည်းဘာသံမှမထွက်အောင် ကာ/ချုပ် တာဝန်ကို ၃နှစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နောက်သမ္မတကို ၂၀၁၅တွင် ရွေးချယ်ရာ၌ တပ်မတောရွေးချယ်ရမည့် ဒုသမ္မတတစ် ဦးမှာ ထိုအချိန်တွင် အသက်၆၀ပြည့် ပင်စင်ယူရမည့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်နိုင်သည် ဟုဆိုသည်။ လောလောဆယ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ခရီးစဉ်များတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် အများဆုံးလိုက်ပါသူတစ်ဦးဖြစ်နေသည်။ သူနှင့် မိသားစုမှာ စီးပွားရေးလောကတွင်နာမည်မရှိ၊ ရိုးဖြောင့်သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးအဖြစ် နာမည်ရနေသူဖြစ်သည်။
28 Nov 2013 joined Facebook: https://www.facebook.com/seniorgeneralminaunghlaing
One Response to ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
Sai Lin Kan on January 4, 2014 at 9:55 pm
Well, if Gen Min Aung Hlaing wants to be President one day and then I have no objection for that but he must leave Military and enter Election.
As you wrote, Gen Min Aung Hlaing is good person and good service man. I agreed with you.
I want to askafew questions for Gen. Min Aung Hlaing. Please ask him for me when you have chance with you’re best friend Gen Min Aung Hlaing.
Q1. Who he (Gen Min Aung Hlaing) will choose to loyal and faithful between peoples of Burma and former dictator Than Shwe?
I heard peoples are whispering about Gen Min Aung Hlaing as Than Shwe’s puppy. He will do whatever former dictator asks him to do. That’s why Than Shwe had choosing him over other his senior Generals for Military Commander-in-Chief.
Q2. Why he can not keep truce and peace agreement with ethnic minority groups?
Q3. Does he think continuing civil war between Government and ethnic minority groups is important for military to stay in above of all?
Q4. Does he think he was above the Government and he does not need to obey Government?
Q5. Will he accept justice or interfere with justice if Government took action against former dictator Than Shwe for crime against humanity and other charges?